Muuri News Network » DAAWO: Ciidamada Boliska oo Dhoolatus aan caadi aheyn soo bandhigay
DAAWO: Ciidamada Boliska oo Dhoolatus aan caadi aheyn soo bandhigay
Muqdisho, 20 December 2015: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray dhammaan Ciidammada Booliska Soomaaliyeed iyo qoysaskooda, munaasabadda 20-ka December awgeed oo ku beegan sannad-guuradii 72-aad tan iyo markii la aasaasay Ciidammada Booliska Soomaaliyeed.
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed waa hooyadda dhammaan ciidammada kala duwan ee Soomaaliya leedahay. Waxaa ciidankan uu misaal u yahay soo kabashada Soomaaliya, iyadoo aan ognahay inay ku guuleysteen inay badbaadiyaan keydka taariikhiga ah ee uu ciidanku lahaa. Waxaa munaasabadihii horay halkan uga dhacay na loogu soo bandhigay galka askarigii ugu horeeyay ee booliska loo qoray sannadkii 1943-kii, markii ciidankan la dhisay, taasina waxay muujineysaa kartida ciidankan iyo sida geesinimada leh ee ay u difaacdeen keydkooda taariikheed”, ayuu yiri Madaxweynaha oo maanta xarunta Akademiyadda Booliska ee Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho kaga qeybgaley munaasabad si qurux badan loo soo agaasimay oo lagu xusayey maalinta booliska.
Dowladnimadu waa xoog sharciyad leh. Halkudhegga ah Sharciga ilaali ha ku ilaaliyee, waxaa micmaheedu yahay in shacabka ay sharciga u hiiliyaan si ay nabad iyo caddaalad ugu noolaadaan.Aad baan ugu faraxsanahay horumarka uu sameynayo Ciidanka Booliska Soomaaliya.Waxaan si gaar ah u ammaanayaa Taliyaha Ciidanka Booliska Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan, oo ah nin laamaha amniga ee dalka horumar badan ka sameeyay, sida diyaarinta kaadiriinta cusub ee Ciidammada Nabadsugidda Qaranka, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo haatan booliska.